FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SARPLANINAC - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Sarplaninac
'Ity i Hera, Sarpie telo taona izay nifanena taminay tamin'ny fisafoana an-tongotra iray tany avaratr'i Kosovo. Vao avy namoaka ny ondriny ny tompony, ka vao mainka te hiambina ilay trano ilay alika. Toa tsy dia lavitra antsika izy satria nandalo fotsiny izahay, saingy azonao lazaina fa raha nifanakaiky kokoa izahay dia nanomboka naneho herisetra izy. '
Mpiandry ondry Illyrian
Alika mpiandry makedoniana-yugoslavia - Sharplaninec
Alika mpiandry ondry any Serbia sy Montenegro
Alika an-tendrombohitra Yugoslavia
Alika mpiandry ondry Yugoslavia
Ny palitaon'ny Sarplaninac dia 10 santimetatra ny halavany. Ny volo dia matevina ary zaraina mitovy. Ny loko dia misy: volondavenona, fotsy, mainty ary mainty. Ny loko dia mety ho mafy na mifangaro. Ny Sarplaninac dia iray amin'ireo mpiambina andiany vitsy izay tonga amin'ny loko matevina ankoatry ny fotsy. Ny vatana dia salantsalany amin'ny habeny sy taolana. Ny volom-borona eo ambanin'ny kibony sy ny tongony ary ny rambony miraviravy kosa dia manome endrika alika huskier be. Ny tendron'ny orona dia somary lehibe, nefa tsy mipoitra. Ny rambo dia miondrika kely amin'ny fialan-tsasatra. Ny vodin-tànana dia volom-borona tsara, hozatra tsara ary saika mitsangana. Maizina sy endrika amandy ny maso. Ny fanehoana mazoto sy manavakavaka dia toetra mampiavaka azy.
Alika mpiambina ny Sar izay mila miasa. Ity alika mpiandry mpiandry ondry ity dia tsy misy fiatraikany amin'ny olony. Aleony ny andian'ondry arovany amin-kafanam-po. Izy io dia manana toetra miaro voajanahary sy fisainana tsy miankina mahazatra an'ny vondrona mpiandry ondry. Milamina matetika, fa rehefa mila ny toe-javatra, dia masiaka amin'ny fiezahany hiaro ny andian'ondry. Mankamamy ny asany tokoa izy io. Rehefa miambina mpiandry ondry izy dia hanadihady izay zavatra mahasarika ny masony, ary tsy hisalasala ny amin'ny fifanatrehana amin'ny fahavalo lehibe kokoa noho izy. Tsy mpiremby rambony tsy misy atidoha ity ny Sarplaninac dia alika hendry izay mifidy tsara ny namana ary tsy matoky tanteraka an'iza na iza. Mankato kokoa ny fitsipi-pitondran-tena mendrika izy fa tsy mandray baiko avy amin'ny tompo iray, izay tena mahatoky indrindra aminy. Ireo alika ireo dia tena natokana ho an'ny ondriny. Sar iray iray 6 volana amin'ny fandaharan'asa mpiambina andian'ondry any Etazonia dia nanomboka niara-niasa tamin'ny ondry tao am-bala. Bruno no anarany ary tsy afaka nifanalavitra tamin'ny tranony 'izy', na nilalao aza. Tamin'ny lohataona anefa, dia namidy ny ondry sasany, ny sasany novidina ary ny ondry dia nalefa tany amin'ny kijana. Ny alika no mpiasa mety indrindra, nifanaraka tamim-pifaliana tamin'ny ondry vaovao sy trano vaovao. Ny mpiompy ondry sy osy dia mahita tombony amin'ny fananana Sar rehefa manjavona ny ankamaroan'ny olany mpihaza. Ireo alika ireo dia handefitra amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana, anisan'izany ny ankizy, raha notezaina niaraka taminy izy ireo, saingy hiaraka amin'ny any ivelany. Hiaro ny faritaniny rehetra sy ny zava-manan'aina ao aminy ny Sar. Karazan-kazo io ka tsy tokony hatao ambanin-javatra. Mety ho traikefa mahafa-po raha apetraka amin'ny toe-javatra mety. Mitaky asa, fotoana ary, toy ny zavatra hafa rehetra amin'ny toeram-piompiana, fitantanana araka ny tokony ho izy ireo. Raha mikasa ny hitazona ity karazany ity ho mpiara-miasa ianao fa tsy toy ny alika fiompiana miasa, dia alao antoka fa 100% ianao matanjaka, matoky tena ary mpitarika fonosana tsy miova . Ny tompona malemy fanahy dia hahita fa tsy mahafehy an'io alika io izy ireo. Tsy alika ho an'ny vao manomboka izany.
Hahavony: 22 - 24 santimetatra (56 - 61 sm)
Lanja: 55 - 88 pounds (25 - 39 kg)
Ny Sarplaninac dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Manana palitao amin'ny toetrandro rehetra izy ary ho afa-miaina sy matory any ivelany. Ny toetrany dia mitaky fahazotoana, fiainana ivelan'ny trano. Izy no miaina tsara indrindra amin'ny toeram-piompiana miaraka amina andiam-piarovana.
Mila fampihetseham-batana be ity karazana ity. Amin'ny toeram-piompiana malalaka, hikarakara ny filan'ny tenany manokana izy io, na izany aza, raha tsy miasa amina toeram-pambolena izy io dia mila raisina isan'andro MANDEHANA na jogging.
orona manga amerikana omby
11-13 taona eo ho eo
Ny palitao dia handray soa amin'ny fikosehana tsindraindray.
Ny anarana Sarplaninac dia tononina 'shar-pla-nee-natz.' Avy amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Srbija (atsimon'i Kosovo) sy ny faritra avaratra andrefan'i Makedonia (Shar Planina, Bistra, Korab, Stogavo, Mavrovo, Jablanica ary Pelister, sns). Io faritra jeografika io dia fantatra amin'ny anarana hoe Illyria, anarana voalohany nomena ny karazany. Nantsoina hoe Makedonia ny faritra ankehitriny, fa ny alika kosa niasa indrindra tany an-tendrombohitra Shar Planina ary nomena anarana hoe tandavan-tany. Tamin'ny 1939, ny alika dia voasoratra anarana amin'ny FCI amin'ny alika mpiandry ondry Illyrian. Tamin'ny 1954 dia nanaiky ny fanovana anarana avy amin'ny alika mpiandry ondry Illyrian ny FCI ho lasa anarana hoe alika mpiandry ondry Yugoslavia-Sharplaninec. Taorian'ny fianjeran'i Yugoslavia sy ny Firaisana Sovietika, nangataka ny hanovana ny anaran'ilay alika i Makedonia hahafantarana ireo firenena roa tonta, Makedonia ary ny lafiny Serba. Nifanarahana ny fanovana ny anaran'ny alika ho alika mpiandry hebreo-yugoslavia - sharplaninec. Ny Sarplaninac dia manana voninahitra ho iray amin'ny alika roa ihany izay eken'ny Yugoslavian Kennel Club, klioba ofisialin'ny tanindrazany. Heverina ho antitra noho ny Istrian Shepherd (na dia tsy antitra toa ny Dog Shepherd Dog na ny Akbash Tiorka) aza, io mpiambina voatokana io dia misy amin'ny isa maharitra any Albania sy Makedonia. Voamarina voalohany ho karazany miavaka tamin'ny taona 1930. Na dia ny fikorontanana any Bosnia aza dia nampihena ny isan'ny karazan'io karazan-tany io tany amin'ny faritra afovoany taloha, nanomboka ny taona 1975 dia nisy fanondranana nahomby natao tany Etazonia sy Kanada mba hifehezana ny coyotes, ary eto no mipetraka ny filaminana ho avy. Ankehitriny dia mahazo fankatoavana ho mpiandry ondry miasa mafy sy mora azo izy ireo any amin'ireo firenena ireo. Betsaka amin'ny tanindrazany, ny Sarplaninac dia mbola anisan'ny andian'ondry lehibe. Maromaro izy io ary miasa omby indraindray na miambina. Raha ny marina dia nisy tsipika miaramila an'ny Sars noforonina tao amin'ny kennel an'i Marshall Josip Tito.
Almà Sarplaninac, 2 taona avy any Hongria— 'Alika tanora vavy i Almà izay milamina tokoa matetika. Tokony hanana zanak'alika izy atsy ho atsy. '
'Sasha dia Sharplaninec fantatra amin'ny anarana hoe mpiandry masedoniana aseho eto amin'ny faha-2 taonany. Manana toetra lehibe izy ary mpiaro tena tsara amin'ny tompony. Izy dia karazany lehibe manana palitao lava. Sasha dia tena manan-tsaina ary mahay mampiofana. Ny olana fotsiny dia ny fanjonoany. Izahay dia manamboatra izany ary mianatra izy. '
Hera the Sarpie amin'ny faha-3 taonany
'Ity i Bear, Sarpie enin-taona ary ny tompony akaikin'ny tanànan'i Novo Brdo any atsimo atsinanan'i Kosovo. Nanomboka nimenomenona taminay i Bear raha vantany vao nanakaiky izahay, saingy nivoaka ny tompon-trano ka nandresy lahatra ahy mba hamono azy. Toa sahiran-tsaina ihany izy momba ireo mpitsidika vaovao, ary fantatro tsara fa raha tsy teo ny tompony dia tsy ho lasa akaiky toa ahy aho. Rehefa nilaza aho fa efa namaky fa alika mpiandry ondry lehibe izy ireo dia nanomboka nitsiky ny tompony ary nilaza tamiko fa namono amboadia roa i Bear azo antoka fa fantany izany. Tsy hitanao eo amin'ny sary, fa ny antsasaky ny sofiny ankavia kosa tsy hita - azo inoana fa anisan'ireo ady ireo. '
'Zahao ny Sarpie amin'ny faha-6 taonany- zavatra iray mbola tsy vitako mihitsy rehefa nahita ireo alika ireo dia ny palitao tsara tarehy, indrindra ireo manana akanjo ivelany mainty. Manana sary alika vitsivitsy hafa aho izay azoko antoka fa mifangaro amin'ny Sarplaninacs ary ny zavatra eritreretiko dia mpiandry alemanina (satria mahazatra azy ireo matetika eto), ary mitovy ny fandokoana azy ireo, saingy tsy namboarina ny vatana mitovy ihany, ary misy fahasamihafana mazava eo amin'ny toetra - miaraka amin'ny karazam-borona mifangaro kokoa. '
'Nilaza ny tompon'i Bear fa mirehareha amin'ny alika izy, ary izany no antony lehibe namatorana azy rehefa tsy miandry ahitra ny ondry.'
'Ny sary farany nakariko dia somary mifanohitra amin'izany, satria Sarpie' milalao 'amina alika hafa any avaratr'i Kosovo akaikin'ny sisintanin'i Serba. Ny alika kely kokoa dia manelingelina kokoa, fa ny Sarpie kosa toa nankafy nilalao niaraka taminy. '
Ity no Bistra mpiambina ny tanànako any Lazaropole-R. Makedonia. Tsy olona iray no tompony, fa an'ny olona ao amin'ny vohitra misy anay ary samy mikarakara azy sy ny alikany izahay rehetra. Lehibe izao ny alikany. Amin'ny ririnina dia ny mpikarakara ny meteorolojika no mikarakara azy ireo. Izy rehetra dia tena sariaka miaraka aminay, saingy tsy dia tia milalao. Heveriko fa izany no voajanahary fiarovana azy ireo hiambina hatrany. Aza raisina ity karazana ity raha tsy azonao omena toerana malalaka izy io.
Bistra the Sarplaninac mikarakara ny tanàna
Bistra the Sarplaninac miaraka amin'ny zanany
Jereo ny ohatra misimisy kokoa momba ny Sarplaninac
Sarplaninac Sary 1
Sarplaninac Sary 2
retrievers volamena izay mijanona kely mandrakizay
amerikana pitbull amerikana bulldog mix
sarin'alika zanak'ondry mpiandry alemà fotsy
retriever volamena roa taona
mpiandry alemanina sy bulldog frantsay